Vol. 12 OCTOBER, 1910. Nha. 1
PASI pasati pava, panguva, uye mushure mekuratidzira kwese konkiri kune mamiriro. Kubva pachiyero chejecha kusvika pasi, kubva pamhepo kusvika kune yakakosha oak, kubva pamhuka kusvika kumunhu, muviri wese wemuviri unovapo mukati meumwe mamiriro ayo chaiwo, unochengetedza chimiro chayo mukati uye unopedzisira wanyungudika mumhepo yawo.
Izwi iri rinoturikirwa kubva kuChigiriki, atmos, zvichireva mupfu, uye sphaira, nzvimbo. Iri izwi rinoshandiswa kurongedza mweya unotenderedza pasi uye chechipiri chinhu chakatenderedza kana pesvedzero, yemagariro kana hutsika, iyo iyo nharaunda iri rimwe izwi. Izvi zvinoreva zvinosanganisirwa mushoko seshoko rinoshandiswa pano, asi mukuwedzera iro rine kukosha kwakadzama nehupamhi hwekushandisa. Kuwedzera kune kwayo kushoma kwemuviri, mamiriro ekunze anofanirwa kunge achizivikanwa kuti ane hutano hwakanyanya hwekushandisa uye kushandisa, uye zvinofanirwa kunzwisiswa kuti kune zvekare nzvimbo yemafungiro, mamiriro epfungwa nemhepo yemweya.
Hutachiona hwezvinhu zvese zvipenyu zvinobatiswa mukumiswa mudenga zvisati zvavapo mumvura kana nepanyika. Hupenyu hunodiwa kune zvese zvinhu zvemuviri hunobva uye unotenderera kuburikidza nemhepo. Mhepo inopa hupenyu kune mafomu epasi nepasi pacharo. Mamiriro ekunze anopa hupenyu kumakungwa, nyanza, nzizi uye mafirizi. Kubva mudenga kunouya hupenyu hunotsigira masango, zvinomera, uye mhuka, uye varume vanowana hupenyu hwavo kubva mudenga. Denga rinoburitsa uye rinoburitsa mwenje uye kurira, kupisa uye kutonhora, uye nezvinonhuwira zvepasi. Mukati maro mhepo dzinovhuvhuta, mvura inonaya, makore anogadzirwa, mheni dzinopenya, madutu akasvinudzwa, mavara anoonekwa, uye mukati mayo zvese zviitiko zvechisimba zvinoitika. Mukati medenga mune hupenyu nerufu.
Chinhu chega chega chine izvo zviripo mukati medenga. Mukati maro mairi mumamiriro ezvinhu echimiro chechinhu chimwe nechimwe chinoitika. Dhara kana kuvhara chinhu kubva mumhepo yayo uye hupenyu hwayo ichachiisiya, chimiro chayo chinoparara, zvikamu zvaro zvichatsemuka uye nekuvapo kwaro kuchapera. Dai mhepo yepasi yaigona kuvharwa kubva pasi, miti nezvirimwa zvaifa uye zvaisagona kubereka chikafu, mvura ingadai isina kukodzera kunwa, mhuka nevanhu vangatadza kufema uye vaizofa.
Sezvo pane mamiriro epasi, umo mune iyo nyika inofema uye ichirarama, inochengetedza chimiro chayo uye chaivapo, saizvozvo kune mamiriro ekunze umo, semucheche, munhu anozvarwa, uye maanokura nekuchengeta zvaari . Iwo mamiriro ekunze ndicho chinhu chekutanga chinotorwa nemunhu uye ndicho chinhu chekupedzisira icho, sechisikwa, anosiya. Mhepo yemunhu haisi yekusingaperi uye isingazivikanwe huwandu, ine yakajeka kurongeka uye hunhu. Inogona kuve inoonekera kune iyo pfungwa uye inozivikanwa kune pfungwa. Mamiriro ekunze emunhu haafanirwe kunge akafanana neyechisarudzo huwandu hwe fog kana muputi. Iwo mhepo yemweya yezvisikwa inoenda kunogadzira munhu, ine miganhu yadzo uye inoenderana kune imwe neimwe nezvisungo zvakasarudzika, nekugadzirwa kwakati uye zvinoenderana nemutemo.
Muviri wemunhu mune mudenga wake wakaita senge fetus yakafukidzwa mumumoni uye chorion muchiitiko chekukura mukati menzvimbo yakakura, iwo mudumbu. Vanenge zvikamu zvitatu kubva muzana zvekudya izvo muviri wake unochengeterwa zvinotorwa kuburikidza nekufema kwake. Kufema kwake haingori huwandu hwegesi hunobuda mumapapu ake. Kufema inzira yechokwadi kuburikidza neayo muviri wemuviri unodzivirirwa kubva kumweya nemweya wemweya, sezvo "fetus" inodyirwa kubva muropa rekubuda mudumbu uye placenta nenzira yayo yeguru.
Mhepo yemuchadenga yemunhu inoumbwa neisingasviki uye asingaoneki masumbu emuviri ayo anotorwa mukati uye anoraswa kubva mumuviri wemuviri kuburikidza nemweya wekufema uye kuburikidza nepores yeganda. Iyo masisitimu epanyama anotorwa mukati kuburikidza nekufema anopinda akabatana neayo emuviri nekuchengetedza chimiro chayo. Aya masisitimu epanyama anochengetwa mukutenderera nemweya wekufema. Dzakakomberedza murume wenyama saka dzinoita mamiriro ake epamoyo. Mhepo yemuchadenga inokanganiswa nekunhuhwirira uye zvinonhuwira uye inogadzira munhuwi, uyo uri wemhando nemhando yemuviri wenyama.
Kana mumwe munhu aigona kuona mamiriro epamoyo emurume zvaiita kunge zvisingaverengeke zvimisikitsi mukamuri yakagadzirwa inoonekwa nemwaranzi yechiedza chezuva. Izvi zvaizoonekwa zvichitenderedza kana kutenderera pamusoro pomuviri, zvese zvichichengetwa mukufema pamwe nekufema kwake. Vaizoonekwa vachimhanyisa kubuda, kutenderera nekudzoka mukati memuviri wake, vachimutevera chero kwavanoenda uye zvichikanganisa masumbu ezvimwe zvakasikwa zvepamhepo izvo zvavanosangana nazvo, zvinoenderana nesimba rayo uye nekunetseka kwemweya wemuchadenga waunobata nawo. . Iko kubatana kana kubatanidzwa kwemweya wemuchadenga kuti hosha dzinopararira dziri kupararira uye hutachiona hwemuviri hunowanikwa. Asi muviri wemunhu unogona kuve wakagadzirirwa kudzivirira kubva mukukanganisa muviri nekuchena wakachena mukati uye kunze, nekuramba kuramba uine kutya, uye nekuvimba nehutano hweumwe uye nesimba rekupikisa.
Mhepo yemafungiro yemunhu inopinda mukati uye inotenderera nemhepo yake yemukati. Iwo mweya wepamoyo wakasimba uye une simba zvakanyanya muku pesvedzera kwayo nemhedzisiro pane yemuviri. Iyo psychic murume haisati yaumbwa, asi inomiririrwa muchimiro neye astral fomu muviri wemunhu wenyama. Iine iyo astral fomu yemuviri sepakati, iyo mweya wekutenderera wakakomberedza iwo uye wemuviri kure kure kune simba rayo. Dai zvaizoonekwa zvaizoonekwa semupendero kana mvura iri pachena. Mhepo yemuchadenga yaizoonekwa mukati mayo kunge masisitimu kana sediment mumvura. Mhepo yemafungiro yemurume inogona kufananidzwa neyekadzi yegungwa, ine mafungu anopisa uye anotonhora mafungu, mafungu ayo uye kutenderera kusingaite, chamupupuri chayo nemhezi, kudhonzwa kwayo uye kuitika, uye kusimuka nekudonha kwemafungu ayo. Mhepo yemafungiro emunhu inogara ichirova muviri wemuviri neyemagariro emuviri, seyava yegungwa ichirova mahombekombe. Iwo mweya wepamoyo unopfuura nepanenge nemuviri wemuviri wekunzwa, iyo yemufananidzo wemasumbu. Manzwiro, zvishuwo uye zvido zvinoshanda kuburikidza nemweya wemuchadenga sekukwira uye kudonha kwemasaisai, kana kunge kuita seinopupuma uye kumhanyisa nekuparadza mvura ichipfuura nejecha risina kana chinhu, kana sembambo kana whirlpool ichiedza kudhirowa zvinhu zvese mukati mayo. , pachayo. Kufanana negungwa, iro remukati rine zororo uye hariguti. Iwo mweya wekudyidzana unozvibata wega uye unobata vamwe. Sezvo ichiberekera mukati kana kupfuura kana mafashama iwo muviri weastral fomu, manzwiro ese kana manzwiro anogadzirwa uye aya anoita zvakanyanya nepfungwa yekubata, kubata kwemukati. Izvi zvinosundira kuenda kunze mukuita uye kunzwa sekunge mafungu ari kusimuka anotakura munhu kuchinhu chake, kana kuti chinokonzera kusuwa kwechimwe chinhu uye chobva chaburitsa kunzwa sekunge chiitiko chakasimba.
Kutenderera kuburikidza neye astral fomu yemuviri uye yakakomberedza iyo yemuviri, iyo yemweya mamiriro akaita seimwe yezvinhu ayo ekunyengera maitiro anotaurwa nezvawo semagineti yemagineti. Iyo ine masisitimu muchimiro chayo uye inogona kunge iine simba rekukwezva vamwe. Mhepo yemafungiro emurume inobata vamwe vaanosangana navo, zvichienderana nesimba rayo kana kuti zvemagineti uye zvinoenderana nehukasha hwevamwe varume, kuburikidza nemafungiro avo epamoyo. Aya mamiriro epfungwa yemumwe munhu anosimudza uye anogadzirisa mweya wepamoyo yemumwe munhu kana yevakawanda uye ipapo anoita zviito pane yemuviri kana yemiviri; uye nhengo dzemuviri dzinogumbuka zvichienderana nechimiro cheshungu kana manzwiro kana kuchiva icho chiri mukurusa. Izvi zvinogona kuitwa nekungovapo kweimwe chete, pasina kushandisa kwemashoko kana kuita kwerudzi chero rupi zvarwo. Zviya zvekuti vamwe vanonzwa vakamanikidzwa kuita kana kutaura zvinhu kana kupa manzwiro kune mamwe manzwiro, izvo zvavasinga kudaro kana kusingafungidzirwe nemweya wemuchadenga kana maginiti emunhu iyeye anovamanikidza kana kuvadhonza. Mumwe anoona kuti mamiriro ake epfungwa ari kupomhodza mumwe kupokana nezvaanoziva kuti zvakanakisa, kana kana achiona kuti haana kufanira, anogona kutarisa chiito kana kushandura simba nekusasimbisa manzwiro kana chishuvo chaainzwa, uye nekuchinja mafungiro ake kuchinyorwa chechimwe chimiro uye nekubata kwake kufunga kwakasimba kuchinhu icho. Kunzwa kwese nekunzwa kwese kwese mhando kunogadzirwa nenzira yemukati yemweya nemweya yemweya yemamwe. Mhepo yemafungiro evamwe vanhu ine mhedzisiro yekumutsa, inonakidza, uye inonakidza avo vavanosangana navo. Izvi zvinogona kuve zvemhando inofadza. Vamwe vane mhedzisiro inopesana yekukanganisa kana kufa kune avo vavanosangana navo, kana kuita kuti varege kufarira zvinhu.
Iwo mweya wekudyidzana ndiyo svikiro iyo iyo pfungwa dzinoshanda pane yemuviri muviri kuburikidza neyemagariro fomu yemuviri, uye ndiyo iyo svikiro neinowanikwa zvese pfungwa nemanzwiro zvinopihwa kune pfungwa. Pasina iyo yemweya yemuchadenga, pfungwa yemunhu mune yayo ikozvino mamiriro ebudiriro aisakwanisa kuziva kana kutaurirana pamwe nekuita pane iye muviri wenyama kana wepanyama.
Mune iripo mamiriro ezvinhu ekukura kwemunhu murume haana mutsanangudzo uye yakanyatsorondedzerwa muviri wepfungwa mukati mehupenyu hwake hwepanyama. Asi kune kune chaikoiko kwemamiriro ekunze ayo anotenderera nekuita uye kuburikidza nemweya wake wemukati, uye kubva ipapo pane muviri wemuviri kuburikidza nemweya wekufema uye nenzira yemitsipa yenzvimbo dzemuviri. Iwo mamiriro epfungwa akafanana sedunhu remagetsi kana magetsi emagetsi, seakasiyaniswa kubva kumagineti yemweya wemweya. Izvo zvinoenderana nemweya wemuchadenga sezvo magetsi ari kumagineti. Iwo mweya wepfungwa unokwezva mamiriro epfungwa uye nenzira yechiitiko chemukati wepfungwa uye kuburikidza nemweya wemukati zvese zvepfungwa uye zvemuviri zviitiko uye zviratidzo zvinogadzirwa kana kuunzwa.
Pfungwa dzinofamba-famba mumamiriro ayo epfungwa hazvinzwisise, uye haisi pasi pekunzwa kwerudzi chero rupi zvarwo. Chete kana ichiita kuburikidza uye nekuwirirana nemweya wemuchadenga nemuviri wemuviri ndiyo inogona kusangana uye inosangana nekunzwa. Pfungwa dziri mumamiriro ayo epfungwa dzinoshanda nenzira yekufunga. Pfungwa inoshanda mune yayo yemukati mepfungwa uye kana ichiita mukufunga kwekufungidzira haina mhirizhonga.
Chete kana pfungwa ikanyudzwa mumhepo yemweya uye yakabatana nemanzwisisiro anoita pfungwa dzinonzwa.
Iwo mamiriro epfungwa akakosha kune hupenyu hwevanhu sekudikanwa nemhepo kune pasi uye nemvura uye nehupenyu hwezvirimwa nemhuka. Pasina iwo mamiriro epfungwa munhu wepamoyo angave achiri kurarama, asi angave ari mhuka chete, maniac, kana idiot. Imhaka yemamiriro ekunze epfungwa ayo munhu wenyama anozviratidza kuti ariko uye anopfuura mhuka. Mhepo yemuchadenga yega haina hana kana kushushikana mutsika. Iyo yakasimbiswa uye inotungamirirwa nechishuwo, uye haina kuvhiringidzwa nemifungo yehutsika kana yezvakanaka nezvakaipa. Kana mweya wepfungwa uchibatana uye uchiita maererano nemweya wepadenga, pfungwa yetsika inomutswa; zano rechakanaka nechakaipa rinotariswa, uye, kana chiito chakatariswa chakapesana nepfungwa yakamutswa mutsika, ipapo hana inodemba, Kwete. Kana pfungwa dziri mumamiriro epfungwa dzikapindurwa neizvi Kwete, mamiriro epfungwa anokunda, dutu remhepo rine mhepo, uye iyo inofungidzirwa kuita zvounzenza haibvumirwe. Asi kana chishuwo chakasimba pane kufunga kwesimba, mweya wepadenga unozvivharira iyo nguva iyo mweya wepfungwa uye chishuwo chinoiswa muchiitiko sezvo mamiriro ezvinhu nemamiriro ezvinhu zvichabvumidza.
Mhepo yemafungiro yemurume inobata vamwe nenzira dzakasiyana neiyo yemamiriro ake epamoyo. Mhepo yake yemafungiro inokanganisa manzwiro evamwe, uye chishuwo ndicho chinhu chinoshanda uye pfungwa ndiyo mhedzisiro; nepo, iwo mamiriro epfungwa anokanganisa vamwe nemaitiro epfungwa. Pfungwa ndizvo zvinhu zvinogadziriswa nemaitiro epfungwa. Iko kushanda kwenzvimbo yemweya inosetsa uye kunoguma nekunzwa. Iwo emamiriro epfungwa epfungwa ane huchenjeri, uye anoguma nekufunga. Kuita kwepfungwa pane yepamoyo mamiriro ane hutsika, uye kana iyo psychic ichitongwa nepfungwa mhedzisiro mugariro.
Zvakazvimirira zvemuviri wenyama nemamiriro azvo uye nemweya wemuchadenga wemurume kana wevamwe, mamiriro ake epfungwa anomuka, zvinomutsa uye zvinokurudzira vamwe kuti vafunge uye vanopa kwavari zviitiko zvekufunga, kana zvisina kudaro zvine mhedzisiro yekuisa damper pairi, kudzvinyirira , kusimuka uye kubvisa mabasa avo epfungwa. Izvi hazviitwe nguva dzose uine chinangwa. Imwe inokanganisa vamwe inogona kunge isinga zive mhedzisiro; mhedzisiro idzi dzinogadzirwa aine kana pasina chinangwa chake zvichienderana nesimba repfungwa dzake uye kugona kwemamwe mamiriro epfungwa kune vamwe. Idzo dzakaenzana, kana dzinenge dzakaenzana, dzakajeka nzvimbo dzepadenga dzinogona kusangana uye kupikisidzana kana zvibodzwa zvavo zvasiyana. Kupikiswa kwakadai kunogona kumutsa uye kuburitsa kana kuvaka simba rekufunga, uye kunogona kusimbisa mamiriro epfungwa ezvavo kana ese ari maviri, kana zvisiri kuburitsa mhedzisiro inopesana nekukunda uye kukunda.
Iwo mamiriro epfungwa ndiwo murevereri pakati pemurume wenyama wepanyama nehunhu hwake hwemweya, uye humwechete kana munhu wemweya. Kuburikidza nemagariro epfungwa nemifungo inoshanda mukati mayo, chishuwo chine simba mumamiriro ayo epfungwa anonetsa anogona kudzorwa uye kudzorwa uye munhu wenyama akagadzira chishandiso chakakwana icho zvishuvo zvinoshanda zvine hungwaru, pfungwa dzakadzidziswa uye dzikaita zvizere kuziva pachayo nebasa rayo munyika uye nekuenderera mberi nekuziva kusafa kwasvika.
Kusiyana nevarume vepanyama uye vemuviri mune zvepamoyo nemweya yemudenga, murume wemweya mune yake yemweya ane zvachose. Izvo zvinokonzeresa nekuda kwekutsanangurwa uku uye kugona kwemweya wemweya wemweya kuti mweya wepfungwa wakavezwa, mweya wekudyara wakaiswa pamwe nemweya uri kunzi uvepo, woga mukati uye kuburikidza neumwe, uye kuti wepanyama nepfungwa uye nepfungwa. mhepo dzinoteedzeredzwa mushure asi dzakasiyana neimwe nzvimbo nemweya wemweya.
Kuti pfungwa dzingafungise senge inyaya yekufunga, mamiriro emweya wemunhu angafananidzwa nenzvimbo isina ruvara yechiedza chisina mumvuri nemurume wemweya kune icho chinoziva uye muchiedza. Nenzira yehukama uye chikamu, mumwe anogona kuona mamiriro epfungwa seari mukati mechikamu chakadzika chemweya, zvemukati zvepfungwa, zvepanyama mukati memweya wepadenga, uye munhu wenyama sekudzvanya kwevose.
Kunyange iyo yemweya kana yemweya wemuchadenga inogona kuoneka nemaclairvoyants. Mhepo yemweya inogona kunge iripo, asi kazhinji haibatwe nepfungwa, kana kunzwiwa nemunhu, nekuti pfungwa dzinowanzove nehanya nezvinhu zvekunzwa. Kunyangwe pazvinotariswa zvemweya zvinotaurwa nezvazvo maererano nepfungwa, asi munhu wemweya nemweya wemweya hazvisi zvekunzwa kana zvemabasa epfungwa. Mhepo yemweya haigone kunzwiwa nemunhu nekuti mweya yemweya inoshungurudzika uye isina kugadzikana zvekuti varume havanzwisise simba remweya kana kududzira kuvapo kwaro. Mumwe anogona kuona mamiriro ake ekunamata nekunzwa kana nehana kuti iye, "ini," acharamba achiziva kunge ane chekuita nerufu. Kuenderera mberi kwekuti "ini" ndichanzwa chaiko pane kufa. Nekuda kwemamiriro ekunze, pfungwa hadzinzwisise uye kutaura zvisiri izvo manzwiro ekuenderera mberi kwa "ini", uye ndokupa kukosha kuhunhu (ndiko kuti, pfungwa yangu uye kwete hunyanzvi hwandiri), ine chishuwo chakasimba. zvichaenderera mberi. Kana pfungwa dzichitofunga zvemweya wemweya, iwo mamiriro ekunamata anobatwa serunyararo uye chinyararire simba uye risingapindiki. Iwoya wemweya unopa kune kutenda kutenda, kwakadzika-uye kwakadzika uye kusingaperi pane chero mafungidziro angangogadzirwa neuchapupu hwemanzwiro kana nepfungwa. Nekuvapo kwekuvapo kwemweya wemweya, pfungwa yemuviri ine kutenda mukati mekusimbisa kusafa kwayo.
Chikamu chakadzika chemukati chendangariro hachimboreru kufunga nezvemunhu wemweya kana mhepo yemweya inoita kuti huvepo hwayo huzivikanwe, nekuti mweya wemweya hauna kufambiswa uye wakasarudzika kubva kumweya wepadenga zvekuti unoburitsa kushamisika, kudzikama, simba uye kuvapo , zvinoshamisa kwazvo kuti zviratidzwe nepfungwa dzemunhu pasina kutya kana kuvhunduka. Zvekuti kana mweya wemweya uchizvizivisa nekuvapo kwayo pfungwa inotya kwazvo kuti ive yakanyarara uye kuti izive.
Vashoma vanhu vakapa pfungwa kuchinyorwa chemamiriro ekunze sekushandiswa kumurume mumwe nemumwe. Pamwe kusiyana uye hukama huripo pakati pemuviri, wepfungwa, hwepfungwa uye hwemweya murume pamwe nemamiriro avo epadenga haana kutariswa. Zvakangodaro, kana iyo pfungwa ichizvinetsa nenyaya yemudenga uye ikanzvera zvinehungwaru, minda mitsva ichavhurwa uye mwenje mutsva unokandirwa munzira iyo pesvedzero inounzwa kuti itakure nemurume pamusoro pevamwe. Mudzidzi achazowana chikonzero nei iye nevamwe vaine zvinopesana uye zvakasarudzika-dzakawanda, uye maitiro ega ega emurume wese anowana kudzora kwechinguvana kwezviito zvake ozopa nzvimbo kune inotevera. Pasina nzwisiso yakajeka yemamiriro ekunze emunhu, munhu haazonyatso kunyatsonzwisisa zviri mukati mechisikigo uye nemirairo iri pasi pemitemo inodzora zviitiko zvemuviri, uye haazokwanisi kuwana, nekuchenjera, kupinda uye kuita mune chero yenyika ipi neayo yakakomberedzwa. Zvishoma zvinozivikanwa nenyaya yemamiriro ekunze, asi hapana munhu asina kujairika nemhedzisiro iyo mweya yemunhu inogadzira paari uye pane vamwe.
Kana munhu akagara ega uye zita remumwe rikaziviswa, zita racho richabva ratova nemhedzisiro. Kana imwe yacho ichipinda, mhedzisiro dzakasiyana inogadzirwa nekuti mamiriro ekunze emushanyi anokanganisa mamiriro epanyama euyo anomugamuchira. Imwe neimwe inokanganisika nemweya wemuviri weimwe, iyo ingave inonakidza kana kwete, zvinoenderana nekumara kana contrariness rechimiro chezvisikwa zvemuviri izvo mumwe neumwe mamiriro epanyama akaumbwa. Muviri wemuviri wega wega unokwezva kana kudzinga mumwe; kana ivo vangave vakafanana zvakanyanya mumhando zvekuti havazombotenderedza kana kukwezva asi kuve "kumba" mukambani yemumwe neumwe.
Zvimwe zvinhu, zvakadaro, zvinomanikidza ivo pachavo. Iwo ndiwo mweya wepamoyo weumwe neumwe. Mhepo yemuchadenga yevaviri inogona kubvumirana kana kupikiswa nemumwe. Ichi chibvumirano kana chishoro chinosimbiswa kana kudzikiswa nenzira iyo mweya yepadenga inobata mumwe nemumwe. Kunze kwekuchiva uko kuri kwechinguva kushanda mune imwe yega yemidzimu yepadenga uye padivi pechinangwa chekushanya, kune chisiko chiri pasi uye hunhu hwemagineti hwemweya wepadenga hweimwe, izvo zvinokanganisa mamiriro ezvinhu epasi nepfungwa dzemweya. . Naizvozvo kuchava kunomutswa kupesana, kutsamwa, godo, kuvava, kuvengana, godo kana chero chinangwa, kana runyararo, hunyoro, kunzwa nemutsa kwekudziya, kukurudzira kana kushingairira zvinogona kukonzerwa. Aya maitiro anogadzirwa nebasa reiyo nheyo yekuda mune iyo bhatiri yemagineti, iyo astral fomu muviri. Iyo yemuviri fomu yeastral inogadzira magineti yazvino uno inobuda kubva kunhengo dzese nemuviri wenyama, asi kunyanya kubva pamaoko nerufu. Ichi chazvino chinoita sekupfava kana kusimba kwemurazvo izvo zvinoita kuti mweya wepamoyo weumwe ufambe mune nyoro kana kune simba mafungu anopinda nekurwisa kana kusanganisa nemweya wemweya weimwe. Kana izvi zvichibvumirana kune imwe yake yemamiriro ekunze anogamuchira, anozvipa uye obvuma kukurudzira uye anoita zvinoenderana nemumwe; kana chimiro chakapesana nemweya wemuchadenga mune iwo mhando nemhando, iwo matenga anozopokana nekuita nenzira imwecheteyo apo panosangana magetsi maviri emhepo; dutu imhedzisiro.
Panguva iyoyo, kana mushure memusangano wepanyama nemweya wemuchadenga mweya wepfungwa wega wega unozvitsigira, uye sekureva kwavo simba uye simba imwe yemweya yemuchadenga inokonzeresa nekudzora nzvimbo yepanyama nepfungwa uye kukanganisa mweya wepfungwa we chimwe chacho. Kana iwo mamiriro epanyama uye epamoyo akasvikobvumirana kune mumwe nemumwe, uye kana nzvimbo yepfungwa ichiwirirana navo, chimiro chakanaka chinokunda uye kuwirirana kunosimbiswa pakati pezviviri izvi. Asi kupokana, kurwara-kurwara kana kurwa kwakavhurika kuchavapo zvichienderana nekusawirirana kuri pakati pemamiriro epanyama nepfungwa nemafungiro evarume vaviri ava.
Kana pfungwa yemumwe yakanyatsodzidziswa uye ine hunyanzvi hwemweya wake huri pasi pehutongi, ichakwanisa kushandura pfungwa nekudzora mweya wepamoyo weimwe. Asi kana pasina pfungwa inotonga yadzo midzimu yemweya, iyo yakasimba yemweya miviri yemuchadenga inokonzeresa nekutonga nzvimbo dzemweya nedzepfungwa dzemumwe.
Kana kumira kwebhizinesi nenzvimbo yemagariro uye zvinhu zvekunzwika kwemuviri zviri zvinhu zvinotarisirwa zvakanyanya, saka zvinonyanya kukanganisa mumwe munhu. Kana ari munhu anofungidzika, anonzwira tsitsi uye nyore nyore akasimuka nemanzwiro uye manzwiro, anozove akanyanya kubatwa nemweya wepfungwa yemutsva. Kana akacherekedza chinhu asati atora chiitiko, kana akapiwa kuongororwa nekutsvagurudzwa, kana achiyera munhu nesimba rake rekufunga, kwete nemafaro aanogona kuburitsa, kana nehunhu hwenyama, ipapo anenge akundwa. inokonzerwa nemamiriro epfungwa eimwe. Zvinoenderana nesameness yerudzi mamiriro epfungwa emumwe anozosangana uye obvumirana neaya uye zvichienderana nesimba rayo iwo uchapesvedzera kana kutungamirwa neumwe. Asi kana imwe pfungwa yemafungiro isingafanire kune imwe, ipapo kuchave nekupokana uye kukakavara, kudzamara imwe yemaviri ichienderana uye kana kupa kune uye kutungamirwa neumwe, kunze kwekunge nzvimbo mbiri dzepfungwa dzakasiyana mune Rudzi runofanira kunge rwakaenzana pamhando, kana kana nzvimbo dzemidzimu dzakasimba zvakakwana kudzivirira chibvumirano uye chichiita kuti varambe vachikanganisa uye vachipesana.
Pfungwa yakajairika haikwanisi kuita zvakananga kuburikidza nemamiriro ayo epfungwa pamhepo yekufunga yeimwe, saka inoshanda kuburikidza kana inosimudzirwa nemweya wayo wepadenga kuti uite mukati mayo pamhepo yepamoyo yeimwe. Pfungwa dzinosvika muuropi uye dzinofambisa pfungwa yemuviri wechimiro, uye chishuwo. Nekuita kwepfungwa nechishuvo uye chimiro, rurimi rwechiedza chisingaonekwe rwunotumirwa kubva pakati pemakona uye pahuma. Saka kuita, imwe pfungwa kusaruta, kunetsekana kana kukwazisa, pfungwa yemumwe kuburikidza nemamiriro ake epfungwa; ndangariro yake inoita nenzira yakafanana uye inosimbisa chiteshi pahuma yake; nhepfenyuro mbiri idzi dzakasimbisa kupenyerera uye kugashira mameseji kuburikidza nepfungwa dzega dzega dzekupfungwa. Mazwi anogona kushandiswa kubatanidza kana kuunza nhepfenyuro mune rapport, asi maererano nesimba rayo mafungiro epfungwa imwe neimwe ine zvazvinoita kune imwe yakazvimirira yemashoko.
Kuti iwo mamiriro emuchadenga weumwe uchikanganisa mamiriro ekunze emumwe, muviri wenyama unofanirwa kunge uri padyo. Kana mweya wekudyara weumwe uchikanganisa iyo yemumwe, zvinowanzofanira kuti muviri wemuviri wese uve mukati mekuona kana kunzwa weumwe. Muviri wenyama unowanzodiwa nekuti iyo mweya wepamoyo unoita kuburikidza nekutenderedza iyo. Kunze kwekunge zviitiko zvakakosha, imwe yemafungiro emidzimu haina kusimba zvakakwana kuti iite kure kure pane psychic yemumwe. Kana mamiriro epfungwa emumwe akabatana neaya eumwe, kuve pedyo kwemuviri hakufanirwe kuti akanganisa mafungiro emumwe. Nemafungiro ake, mumwe anobatanidza mamiriro ake epfungwa nemamiriro epfungwa eimwe. Kuburikidza nemamiriro epfungwa epfungwa anofunga anogona kuvezwa mukati kana kukurudzira kune mumwe.
Mhepo yemweya yemunhu ari kuuya mukamuri inogona kunge iri, asi haiwanzo, pakarepo, inoonekwa nepfungwa. Hazvina kujairika kuti mumweya wemweya wemurume wakaringana pakubata nepfungwa pamwe nehunhu hwake hwemweya kuti hunzwike kana kucherechedzwa nemumwe. Zvakadaro zvinogoneka kuti mamiriro ake ekunamata, kunyangwe ari kunze kwekubatana nemweya wake wemweya, angave akasimba kuita kuti kuvapo kwawo kubatwe nekunzwa nemweya nemweya yepadenga yemumwe, uye kuti kune mumweya wemweya. muhukama pamwe nemamwe mamiriro ekunze. Kana mumwe wemweya wemweya uchitaurwa unoshanda pane imwe yakasununguka yemasimba ake ekufunga uye chimiro chake chepamoyo, uye nekuburitsa kudzikama nekudzikama, uye panguva iyoyo mweya wake wemweya une hukama nehunyengeri uye hunogona kutonga mweya wake wepfungwa nepfungwa.
Zvese izvi zvinogona kuitwa kungava nekushandiswa kwemazwi, uye kunyangwe zvemweya zvevarume vaviri izvi zvisina kutaurwa. Mukudaro simba rekupedzisira uye kutenda uye chinangwa zvaizoramba zvirinani uye nekubata iyo yakafurirwa mushure mekunge imwe yaenda. Kana, zvisinei, nyaya yemweya yemweya ichifanira kutaurwa nezvayo uye iye uyo mumweya wemweya wake wakasimba ungamutsa uye nekumutsa mamiriro ekunze kune imwe nenyaya yechinamato kana yemunhu mumweya wemweya, ipapo iye anenge amutswa angave akafanana zvishuviro seuyo waakaitwa naye. Asi mushure mokunge pesvedzero iyoyo yabviswa, uye zvinoenderana nesimba rehupenyu hwake hwepamweya kana hwepfungwa uye hwekushanduka kwechimwe nechimwe chezvi kusvika kune chimwe, iye achaita nemamiriro ayo eiyo akasimba. Kana mumweya wake ukatonga mamwe madenga, mazano anopiwa uye anotambirwa anozokunda; Pfungwa dzake dzichabvumirana uye mamiriro ake epamoyo anogona kuenderana navo. Asi kana pfungwa yake ichitonga mamwe mamiriro ekunze, kunyangwe mazano achigamuchirwa, achayerwa uye kuyerwa uye neane hungwaru kubata nepfungwa dzake. Uku kududzira kwechimiro kwesimba remweya rakaiswa kunozodzikira kunze kwepfungwa dzake mwenje wemweya wake. Asi kana pfungwa yake isina kusimba zvakakwana uye asingakwanisi nenharo uye pfungwa dzichivhara mumweya wake kubva mumhepo yake yemweya, ipapo mamiriro ake epfungwa anozomutswa mukunamata kwechitendero. manzwiro anozodzora pfungwa dzake. Chiedza chemweya chakapihwa kwaari chinozodudzirwa maererano nepfungwa dzake uye iye achapesvedzera vamwe uye ave iye ega achitongwa nechitendero manzwiro uye manzwiro emanzwiro.
Nekuda kwekusiyana kuri pakati peumwe neumwe wemudenga wemurume zvakanetsa kuti varume vaviri nenzvimbo dzadzo dzakasangana kusanganisa, kubvumirana, kana kuve kukodzera kune mumwe neumwe, kunze kwekunge imwe yega yemudenga yemumwe wevarume yakafanana nerudzi. iyo yeimwe, uye kunze kwekunge mhando nesimba remweya wega wega zvagadziridzwa nemhepo inoenderana yeimwe. Saka chinongedzo chinowanzoitwa pakati pevarume nemhepo yavo.
Kana vaviri vari pamwechete mukamuri uye kuwirirana kuchiitwa, iko kusangana kunoitwa pakati pemhepo yavo. Kupinda kwemunhu wechitatu kuchachinjisa musanganiswa wacho. Chinhu chitsva ichi chinoparadza kukanganisika uye chingokanda mundiro yekudenga iyo miviri, kana iye achizoburitsa chinhu icho chichaenzana zvakaringana, kuchinongedza, kurondedzera uye kuunza zvibvumirano pakati pevarume nemhepo. Mushure mechinguva kusanganisa hutsva kunoitwa pakati pevarume vatatu nemweya yavo. Kuunzwa shure kweiyo yechina neyechishanu murume kunoburitsa shanduko uye mutsauko uye musanganiswa mutsva pakati pemweya wemhepo sezvo chimwe chinhu chitsva chinounzwa. Nenzira imwecheteyo, kusanganiswa kwemweya wemuchadenga iyo inogadzirwa nenhamba yakapihwa yevarume ichashandurwa uye imwe nyowani inogadzirwa sezvo mumwe nemumwe achibuda mukamuri. Hunhu hweyemamiriro ekunze akasarudzika nemhando uye simba reumwe neumwe wemuchadenga weumwe neumwe wevarume.
Nekuvapo kwemumwe kana nevarume vazhinji kamuri uye imba yakazvipa iyo mamiriro ari hunhu hwepfungwa uye zvishuwo zveavo vanogara kana vakagara mairi kana kazhinji. Iwo mamiriro ekunze anofambidzana mukamuri kana imba sekureba mushure mekubva kwevanogara mairi sekusimba kwemifungo yavo uye zvido zvavo zvinosarudza; inogona kunzwiwa kana kufungwa nemunhu anopinda mukamuri kana mumba.
Nzvimbo imwe neimwe inoungana vanhu inemamiriro ekunze, chimiro kana chimiro chazvo chakatemwa nemifungo, zvishuvo nezviito zvevanhu. Matatidziro, zvitoro zvinodhaka uye zvipatara, majeri, machechi, dzimba dzematare edzimhosva uye dzese kana masangano akazvimirira, vese vane hunhu hwavo hwemamiriro ekunze, hunogona kunzwiwa nemunhu wese. Vasinganzwisisike uye vakaonda vanhu havana hutachiona kubva mukuchinja kwemamiriro ekunze, asi vanozonzwa kana kunzwisiswa zvakanyanya nevaya vane pfungwa dzinonyanya kutarisana uye vakamuka.
Musha, taundi, iro guta hombe, rine chimiro charo chisina kujairika. Vanhu vanonzwisisa kana kunzwa chimiro chayo vanochengetwa kure kana kuenda kunzvimbo iyoyo sekudaro nemhepo dzenzvimbo iyoyo dzinoburitsa zvazvinoita pamhepo dzevanhu. Mumwe achafadzwa nemusiyano uripo pakati penhandare yehondo, bhora-pasi, nhangemutange-nhanho, nzvimbo yemisasa-, kana guva. Mifungo yake inoburitswa nekufungidzira kwenzvimbo dzakasiyana siyana ari ega.
Nzvimbo dzinogara dzichigarwa nevanhu hadzisi idzo nzvimbo dzinemamiriro ekunze. Nzvimbo dzenzvimbo uko rutsoka rwevanhu haruwanzotsika-tsika kune imwe neimwe yemamiriro ekunze anoshamisa. Mumwe munhu akafamba nomumasango makuru, pamapani akafara, pamawere matongo, achikwira makore makomo, kana akaburukira mumigodhi, apinda mumapako, kana akatsvakisisa munzvimbo dzepasi, achaziva kuti imwe neimwe nzvimbo yakadai inonzwika uye ine zvakapoteredzwa zvinopesvedzera chimiro chayo chisinganzwisisike. Simba iri rinoziviswa kumhepo yemurume kubva kumhepo yenzvimbo.
Nyika imwe neimwe kana nyika ine mwero wayo, uyo wakasiyana neiwo wamamwe marudzi nenyika. MuGerman, muFrance, murume wechiRungu, Hindoo, Chinaman, kana muArabhu, akasiyana nevamwe. Kana murume wedzinza rimwe akaenda kune imwe nyika anotakura naye mhepo yakasarudzika kunyika yaakaberekerwa uye akaberekerwa. Mumoyo make anozonzwa nevanhu verudzi urwu kunge akasiyana nekwavo. Uyu musiyano wakakomberedzwa unokonzerwa nemamiriro ekunze emunyika yake, ayo anomutaridzika sevanhu vake vanokanganiswa nemamiriro ekunze.
Iwo mweya werudzi unozviratidza mukati medenga. Uyu mweya wenyika kana mudenga unoratidzira mwana asati aberekwa, uye mushure mekuzvarwa mamiriro ekunze ake anokwezva uye anozvishandira amene mumwana nehudiki uye anoratidzwa maari semagariro uye tsika uye rusarura, zvichienderana nenzvimbo yake muhupenyu uye nenzira yekubereka. Mucheche unotakura uye wakasunganidzwa mumhepo mavo mumamiriro ekunze. Uku kunyora kana kudhirowa kana kupenda nyika mukati meumwe neumwe mamiriro ezvinhu kunoratidzwa kwaari se "nyika yekudyara," uye inogona kuonekwawo mune izvo zvinonzi tsika dzenyika nemaitiro ayo anogona kunyange, uye kazhinji kuita, kukanganisa maitiro ake.
Mhepo yenyika inokanganisa avo vanozvarwa mairi uye avo vanogara mairi. Zvinoenderana nesimba uye nesimba rake wemweya uye wepfungwa nepfungwa nemuchadenga munhu anokanganisa mamiriro ekunze emunyika maanogara. Anokwezva kana kudzorwa nemhepo dzenyika, zvichienderana nehukama huripo pakati pemweya wake uye nehunhu kana chinangwa chakavatonga.
Pfungwa dzinowanzogara murudzi rine mamiriro ekunze anogamuchirika kune ayo. Asi zvinowanzoitika kuti pfungwa dzinogara mumuviri umo mamiriro ekunze akasiyana chaizvo nekwavo. Izvi zvinokonzerwa nekarmic zvinokonzeresa, izvo zvingave zvemhando yakaoma. Asi uyo anogara mumuviri zvakadaro anogona kusiya nyika uye osarudza imwe ichave inonyanya kufarirwa nemhepo yake inotonga.
Mumwe anogona kudzidza hwakawanda hwemhando yeumwe neumwe wemamiriro ekunze ake nekucherekedza kuti uye muchikamui chei chimiro chake anokanganiswa nevamwe vevanhu vaanosangana navo, uye nemabatiro aanoita uye mazwi nekuvapo kwake zvinokanganisa vamwe. Haafanire kuita izvi nekuda kwekunyepedzera kusada kuziva kana kubva parudo rwekuedza, asi kuti adzidze nzira yekushandisa zvakanyanya munyika basa rake munyika. Haafanire kuidza vamwe pa "bvunzo," kana kuedza kuona izvo zvavaizoviga kubva kune zvaano zivisa. Kana akaedza kubata vamwe kuburikidza neyemudenga nemafungiro akadai haangafambire kure muzvidzidzo zvake, asi achapfuudza nekusanganisa ake mamiriro epfungwa uye izvo zvaangave angaedza kwavari zvichaita uye zvichamutsidzira uye mamiriro ake epamoyo.
Mumwe anokurirwa nezvinokanganisa uye asingakwanise kuzvidzora anofanirwa kuramba ari kure nechaunga chikuru apo kufara kuri kuitika uye anofanirwa kudzivisa mhomho, nekuti mumhepo yemhomho izere neuchiva uye kuchiva, izvo zvinomutsa mauto aya mumagariro ake ehukama uye zvinogona kumuita kuti aite zviito zvaanozodemba munguva dzakapfava, kana mamiriro emhomho angamuite kuti akuviswe nekuti haapiwi uye kuita zvinoenderana necomputer inodzorwa nemhomho.
Chinhu chekufunda kwemweya wemuchadenga chinofanira kunge chiri chemurume kusvika pakuziva kwake, uye kuti auye nemweya wake muhukama hwavo chaihwo; kuti azive mutsauko pakati pezvakaderera nepamusoro; kuti asimudzire akadzika kumusoro nevazhinji; uye kuti chimwe nechimwe chichaitwa chakakwana munyika.
Kuti murume ave neakakudzika uye yese kutenderera nekusimudzira zvakaringana rimwe nerimwe remudenga rake rinofanirwa kuita uye zvese zvinoshanda pamwechete kuitira zvakanaka. Pfungwa yakadzika mweya inofanira kuziva yega yega yemudenga uye inoshanda mukati uye kuburikidza navo zvinehungwaru. Kuti uite izvi, kuita kunokosha. Iwo mamiriro epanyama anokanganiswa nekuita kwemuviri, mweya wekudyara nechishuwo, iwo mamiriro epfungwa nekufunga, uye nemweya wemweya nekutenda mune izvo munhu zvaanoziva.
Kuti mhepo dzemumwe munhu dzese dziunzwe muhukama kune mumwe nemumwe, panofanirwa kuve nekutevedzana kana kuita zvakafanana panguva imwe neimwe. Panofanirwa kuve nekuita kwakadai kuchamutsa imwe neimwe yemudenga uye kunodenha ruzivo kana mwenje zvine chekuita nezve zvese. Kutaura kwenyama kana mazwi anotaurwa achaita pane yemuchadenga, chishuwo chinoita kuburikidza nemashoko uye ndokuiswa mune chiitiko mweya wepfungwa, pfungwa inopa gwara kuchido uye kudana kuchiitiko mamiriro epfungwa, uye kutenda mukuziva kwevose kuchaenderana mumweya kune mamwe matenga.
Kukwezva uye kukumbira kwewe wepamusoro munhu kungave kwakaitwa neshoko rake rakataurwa, nekuchiva nemwoyo wose kuda kuchiziva, nekufunga zvinorehwa uye nekutenda kwakadzama pamberi peiye wemweya uyo anokwezverwa.
Kunge tambo inopfuura nepakati peyemudenga uye nekubatana nemunhu wenyama, pane icho chakabatana neumwe uye nenzira icho pfungwa mumuviri wayo wenyama chingazoziva imwe neimwe yeyemudenga yayo uye inozvigadzirisa pachayo hukama hwakakodzera kune chero mamiriro ekunze. Ichi hachisi chinhu chisina chokwadi; ichokwadi. Pfungwa dziri mumuviri wenyama dziri pane imwe mugumo weiyo tambo; munhu wepazasi “Ini” ari pane imwe mugumo. Kune pfungwa yemuviri zvinoita kunge pasina mumwe mugumo pane iwo pane iwo zvauri; kana zvisina kudaro, kana ichifunga kuti pane kuguma mune zveMweya, hazvifunge kuti mugumo unosvika sei. Kuguma uko kuri munyama kunogona kusvika kumagumo emweya. Nzira yekusvikako uye kubatanidza magumo iri kuburikidza nekufunga. Mufungo haisi iyo nzira, asi kufunga kunogadzira kana kugadzirira nzira. Nzira ndiyo tambo. Mufungo unofamba pamwe chete neshinda iyi uye unodziona uye unodzosera. Iyo tambo yacho pachayo ndiyo inoziva kubudikidza nemumhepo yese. Kufunga nezvazvo ndiko kutanga; kuziva ndiko kuvhura kwenzira. Nekuramba uchifunga nezvazvo uye nekuwedzera iyo nheyo yekuziva, pfungwa yemuviri inoziva yega uye kuziva yega yepamusoro kune imwe nguva yekupedzisira nheyo yekuziva, uye nekuenderera mberi kwekuedza izvo magumo anozova iwo.